Zororo (Shona) – Evangelical Tract Distributors
Home › Zororo (Shona)
‘Wakafanira kuzorora.’ Tinofara kana vamwe vachitiudza mashoko aya.
Tinopindura tichiti, ‘Chokwadi, ndakafanira kumbowana nguva yokumbosiya basa ndiende kuzororo, ndimboita zvandinoda kuti ndikanganwe nhamo.’
Zvatinoita nguva yezororo zvinosiyan kwazvo. Vamwe vanoshanyira hama dzavo. Vamwe vanongofamba zvavo vasina chavanoita. Vazhinji vanotsvaka mitambo inovafadza chete.
Zororo rinobatsira kuzorodza nyama nendangariro nokuita kuti timbokanganwa nhamo kwechinguva, asi nhamo dzedu hadzipedzwe nokuenda kuzororo.
Muviri nepfungwa hazvisiri izvo zvinoda kuzorodzwa chete. Tinoona kuti mukati medu munochemera runyararo norugare zvatisingagone kupihwa nezororo.
Munamato womurume wainzi Isaya ungatibatsire. Akatarisa kuna Mwari achiti, ‘Unomwoyo wakasimba muchamuchengeta murugare rukuru, nokuti anovimba nemi’ (Isaya 26:3). Achiti zvakare,’Vanoziya anovapa simba; anoshaiwa simba anomupa simba rake’ (Isaya 40:29).
Munhu mumwe nomumwe anotsvaka nzvimbo yaangawane simba norunyararo munhamo dzake dzose. Nhamo dzedu dzakafanana kwazvo: Zvikwereti; kurwara; kusawirirana nevamwe; nokuti tingabudurire sei muupenyu hwedu. Uyewo pane kutya kuti chii chichaitika kwatiri shure kwerufu.
Kazhinji nhamo idzi dzinoita kuti tishaye rugare mumwoyo. Zvatinoshayiwa izvi tingazvipihwe naJesu chete. Anogona kutipa simba norugare mukati mematambudziko, uye anogona kutikanganwira zvitadzo zvedu. Murume anonzi Pauro akaona kuti ichi ichokwadi. Akati, ‘Ndingaite zvose naiye (Kristu) anondipa simba.’ Anoenda mberi achiti, ‘Zvino rugare rwaMwari runopfuura kunzwisisa kwose, rucharinda mwoyo yenyu nemifungo yenyu munaKristu Jesu’ (Vafiripi 4:7).
Asika rugare rwakadai runogara munevaye vanaKristu mukati mavo.
Baiberi rinonyatsotsanangura izvi. Rinoti, ‘Kristu mukati menyu, tariro yokubwinya’(VaKorose 1:27b). Nemamwe mashoko tingati kukwana kwoupenyu kunowanikwa kana Kristu ari muupenyu hwako. Pane chinhu chimwechete chawakafanira kuita. Zarura musiwo woupenyu hwako kuti Kristu apinde saMwari Mweya Mutsvene. Kuda wakapfigira Kristu kunze nokuda kwekusatenda kana kushaya hanya. Asika ziva kuti hapana imwezve nzira yaungawane nayo rugare nesimba. Ngatiteererei mashoko ake, ‘Tarira ndimire pamukova, ndichigogodza; kana munhu akanzwa izwi rangu, akazarura mukova, ndichapinda kwaari’ Zvakazarurwa 3:20.
NDINODA JESU APINDE MUMWOYO MANGU